किन अझै‌ अलमलमा छ नेपाल समूह!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा पार्टीमा अन्तरसंघर्ष गरिरहेको माधव नेपाल समूहले अझ पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। किन त?
ओलीसँग बाँकी विकल्प सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि सत्तारुढ नेकपाको ओली समूह अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलमा देखिन्छ। तर, ओलीसँग भने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा वा अविश्वासको प्रस्तावको सामनाजस्ता सीमित विकल्प मात्र बाँकी छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि के होला नेकपाका दुवै समूहको भविष्य ? आन्दोलनमा रहेको र सरकारमा रहेको नेकपाका दुवै समूह अहिले अदालतको फैसला पर्खिरहेका छन्। केही दिनमा आउने अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिक बाटो मात्र नभई दुवै समूहको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ।
दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन : सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमाथि धम्की नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो पक्षमा फैसला नगरे ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ हुने चेतावनी दिए। निर्वाचन आयोगले ‘केपी ओलीको धम्की’लाई महत्व दिएको उनले आरोप लगाए।
जनसभाबाट ओलीले दिन खोजेका तीन सन्देश नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअगाडि जनसभाको आयोजना गरेर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (ओली) समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यी तीन सन्देश दिन खोजेका छन्।
दाहाल र नेपालका कारण समस्या आयो : पोखरेल नेकपा (ओली) समूहका सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन्।
हामीले उठाएको मुद्दा ठीक छ, जित हाम्रै हुन्छ : दाहाल नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरुले उठाएका मुद्दा ठीक भएकाले जित आफ्नै हुने बताएका छन्।
के हुँदैछ २३ माघमा ? विभाजित नेकपाका दुई समूहले आफ्नो पक्ष बलियो भएको देखाउन जनप्रदर्शन र सभालाई माध्यम बनाएका छन्। यही मेसोमा ओली समूहले २३ माघमा नारायणहिटी दरबारअगाडि आमसभा राखेपछि यसलाई धेरै कोणबाट व्याख्या गर्न थालिएको छ।
जनकपुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप, रामचन्द्र झा घाइते नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहले गरेको आमहड्तालका क्रममा जनकपुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। झडपमा नेकपा नेता रामचन्द्र झा घाइते भएका छन्।
नेकपा अध्यक्ष दाहाल पनि सडकमा (तस्वीरहरु) नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहको आमहड्तालले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। आमहड्तालका लागि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेता कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन्।
वामदेवको एकता अभियानः नेकपाका दुवै समूहको अविश्वास नेकपाको विभाजनपछि वामदेव गौतमले पार्टी एकता अभियान घोषणा गरे पनि तत्काल एकीकरणको सम्भावना नरहेको दुवै समूहको बुझाइ छ।
किन नेकपाका दुवै समूहको तानातानमा छन् पूर्व लडाकु ? नेताहरुबाट उपेक्षित र अपहेलित महसुस गरेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकुलाई नेकपाका दुवै समूहले आफूतिर तान्ने प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छन्। पूर्व लडाकूहरु भने दुवै समूहसँग ‘बार्गेनिङ’ बढाएर आफ्ना माग पूरा गराउनतिर लागेका छन्।
पार्टी एकता अभियान घोषणा सभामा गौतमले भने- विभाजनमा ओली र दाहाल बराबर जिम्मेवार नेकपा विभाजनमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बराबर जिम्मेवार भएको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बताएका छन्।
पूर्व एमालेको शक्तिमा दाहालको ‘धम्कीपूर्ण’ भाषा !
नेकपा मुकेश पोखरेल
पूर्व एमालेमा आएको विभाजनलाई अवसर बनाएका नेकपाको एउटा समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले तत्कालीन सशस्त्र युद्धको झल्को दिन थालेको छ।
दाहाल–नेपाल समूहको सभा : ओलीको आलोचनामै नेताहरुले खर्चिए समय
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले आज काठमाडौँमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको प्रदर्शनपछि सभामा बाेल्ने नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा अर्को समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचनामा नै समय खर्चिएका छन्।
दाहालको टिप्पणी- ‘सिंगो देश स्तब्ध छ, ओली हाँस्दै हिँड्नुभएको छ’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानमाथि प्रहार हुँदा सिंगो देश स्तब्ध भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने हाँस्दै हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहार गरेको दाहालको टिप्पणी छ।
वामदेव अभियानको अर्थ : पार्टी एकीकरण कि अवसरवाद ! नेकपा दुई समूहमा विभाजित हुँदा तटस्थ बसेका नेता वामदेव गौतमले पार्टी एकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर, यसलाई उनको अवसरवाद मात्र भएको अर्थ लगाउन थालिएको छ।
सांगठनिक कार्यविभाजन गर्न माधव नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी भित्रको सांगठनिक कार्यविभाजन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
कर्णालीका दुई मन्त्री र एक सांसदले छाडे ओलीको साथ, लागे दाहाल–नेपाल समूहमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केपी शर्मा ओली समूहबाट सहभागी भएका दुई मन्त्रीले उनको साथ छोडेका छन्। दुई मन्त्रीसँगै एक प्रदेश सांसदले पनि ओलीको साथ छोडेका छन्।
पार्टी विभाजनपछि के होला तत्कालीन नेकपा एमालेको सम्पत्ति? नेकपा विभाजित हुँदा पूर्वमाओवादी नभई पूर्वएमाले मात्र छुट्टिएको राजनीतिशास्त्रका जानकारहरु बताउँछन्। त्यहीकारण दुवै समूहका पूर्वएमाले नेताहरु चुनाव चिन्ह सूर्यको मात्र नभई तत्कालीन एमालेको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा दाबी गरिरहेका छन्।
दाहालको दाबी- 'प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेरै छाड्छौं' नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले हठात विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरेरै छाड्ने बताएका छन्।
नेकपाका दुवै समूहका अध्यक्षसँग चिनियाँ टोलीको बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येचौले नेतृत्व गरेको टोलीले नेकपाका दुवै समूहका अध्यक्षसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेको छ।
नेकपा विभाजनको असर जिल्ला तहमा, पूर्व एमालेभित्र कहाँ को बलियो ? औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी नेकपाभित्र अहिलेको परिदृश्यलाई पूर्व एमालेको विभाजनका रूपमा हेरिएको छ। दुवै समूहमा छुट्टिएका नेताहरूको उपस्थिति हेर्दा त्यसलाई पुष्टि गर्छ। र, विभाजनसँगै पूर्वएमालेभित्र कुन प्रदेशमा कुन समूह बलियो भनेर आकलन समेत गर्न थालिएको छ।
नेकपा एकीकरणका ‘सूत्रधार’ मानिएका चिनियाँ नेता यचौ काठमाडौंमा ! तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि ७ फागुन २०७४ मा सात बुँदे समझदारी हुँदा सीपीसीका नेता यचौ नेपालमा आएका थिए।
दाहाल–नेपाल समूहमै फर्किए छक्कबहादुर हुम्लाबाट प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेद्‌वारी दिएर निर्वाचित भएका छक्कबहादुर लामा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहमा फर्किएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई समूहमा बाँडिएको नेकपाभित्र उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहमा लागेका थिए। उनलाई ओलीले केन्द्रीय सदस्य समेत बनाएका थिए।
नेकपाको दुई समूहमा महिला नेतृ: काे कता ? नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले दुई समूहमा स्पष्ट रूपमै दुई समूहमा विभाजन भएको छ। पार्टी विभाजन हुँदा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी निकट महिला संगठनको नेतृत्व पहिलेकै अनुसार दुईतिर देखिएका छन्।
नेकपाको ७१ वर्षे इतिहास : स्थापनाको १३ वर्षसम्म विवाद, त्यसपछि फुटैफुट नेकपा स्थापनाको दुई वर्षपछि नै २००८ सालमा पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाउँदा उनले पार्टीभित्रै संघर्षको बाटो रोजेका थिए। तर, पुष्पलालको गणतन्त्र र मनमोहनको संवैधानिक राजतन्त्रको लाइनले पार्टीमा फुटको बीउ रोपिएको थियो।
दाहालले भने, ‘हामीलाई अदालतप्रति भरोसा छ, आयोगले पनि विवेकसम्मत निर्णय गर्नेछ’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतप्रति भरोसा रहेको बताएका छन्।